ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု) - မြန်မာနက် လမ်းညွှန်
ISP (အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု)
Myanmar Internet Exchange (MMIX) Featured
Myanmar Internet Exchange (MMIX) was established in September, 2017 as Myanmar’s First Internet Exchange Point. Myanmar Internet Exchange isaneutral, industry-owned Association that provides IP peering facilities for its members. MMIX isaMyanMar Internet eXchange Point and Myanmar’s peering hub. MMIX membership is open to all individual and organizations that can benefit from peering their IP traffic
Office Address: 2nd floor, Building 18, MICT Park, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
TeleNor Myanmar (တယ်လီနော မြန်မာ) Featured
Our call center is available for you 24/7 just dial 979.
No 40, Sattmu-1 Road, (No-1 Industrial Road), Bahan Township
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း568
Ooredoo Myanmar (အော်ရေဒူး မြန်မာ) Featured
ပြည်ပ တွင်ဖြစ်လျှင် +95 997 0000234
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း507
MPT (Myanmar Post and Telecoms) Featured
MPT ၏ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ဆက်လိုက်ပါသည်...
what is call waiting???
Call waiting ဆိုသည်မှာ A မှ B သို့ ဖုန်းဆက်ရာတွင် B မှာ C နှင့် ဖုန်းပြောနေသဖြင့် ဖုန်းမအားသော်လည်း B ၏ဖုန်းတွင် A ဆက်နေကြောင်း ``တီ.. တီ..``ဟုမြည်ပြီး အချက်ပေးမည်... ထိုအခါ Bက C နှင့် ဖုန်းပြောနေခြင်းအား ခနရပ်တန့်ထားပြီး(ဖုန်းချလိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ) A နှင့် ဖုန်းလက်ခံပြောလို့ရခြင်းဖြစ်သည်။C မှာမူ စောင့်စားနေချိန်တွင် တီးလုံးသံကြားနေရမည်ဖြစ်သည်။ A နှင့် ဖုန်းပြောပြီးပါက C နှင့် ဆက်လက်ပြောကြားနိုင်ခြင်းကို Call waiting ဟုခေါ်သည်။
sms to >> 1331 >> Orderdata CW
ယခုကဲ့သို့ ပေးပို့လိုက်ပါက လက်ခံရရှိကြောင်း 1234123 မှ sms ပို့လိမ့်မည်..
လက်ခံရရှိပါက sms to >> 1331 >> Orderdata CH ဟု ထပ်မံရိုက်ပို့လိုက်ပါက Call waiting ကို စတင်အသုံးပြူလို့ရပါပြီ...
လစဉ်ကြေး ၅ဝဝကျပ်သာ ပေးဆောင်ရပြီး မည်သည့် ထပ်ဆောင်းပေးချေစရာမလိုပါ။
what is call forwarding???
Call forwarding ဆိုသည်မှာ A မှ B သို့ဖုန်းဆက်ရာတွင် B က A နှင့်မပြောနိုင်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းမအား၍သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် မပြောဖြစ်လျှင် B က သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသောဖုန်းပိုင်ရှင် C ထံသို့ A ၏ဖုန်း ကူးပြောင်းလွှဲခေါ်သွားမည်ဖြစ်သည်။၄င်း service အားအသုံးပြုလိုပါက မိမိဖုန်းအား လွှဲပြောင်းလက်ခံပေးမည့် ဖုန်းတစ်ခု ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
sms to >> 1331 >> Orderdata CF
လစဉ်ကြေး ၉ဝဝဝကျပ် ပေးဆောင်ရပြီး မည်သည့် ထပ်ဆောင်းပေးချေစရာမလိုပါ။
what is voice mail service???
Voice mail service ဆိုသည်မှာ reject ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ call time ပြည့်သွားလို့ဖြစ်စေ မကိုင်ဖြစ်သောဖုန်းများမှ ပြောကြားသည့်အသံများကို မိမိ၏ voice mail box သို့ သွားရောက်သိမ်းဆည်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။ မိမိအဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် voice mail server သို့ ဖုန်းနံပါတ်နှိပ်ပြီး ပြန်လည်နားထောင်နိူင်ပါသည်။
sms to >> 1331 >> Orderdata VMS
ယခုကဲ့သို့ ပေးပို့လိုက်ပါက လက်ခံရရှိကြောင်း 1234123 မှ sms ပို့လိမ့်မည်.. ထိုချိန်တွင် စတင်အသုံးပြုန်ိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိ၏ voice mail box ကို register လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် 1331 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ပြီး သူပြောသလို အညွှန်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ရုံဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်တွင် english လိုသာ ပြောဆိုရှင်းလင်းပြပြီး မြန်မာလို မပြောနိုင်သေးပေ။ register စတင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိဆီဝင်လာသောဖုန်းကို voice mail ထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း မိ
မိအသံဖြင့် Greeting လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိ voice mail box အတွက် password ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပေးရာတွင် နံပါတ် ၄လုံးမှ ၆လုံးထိ ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး voice signature အဆင့်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကာ မိမိအသံကို မှတ်သားနိုင်ရန်အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် အသံ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်ပြီးမြောက်ပါက မိမိကိုယ်ပိုင် voice mail box တစ်ခု register လုပ်ပြီးဖြစ်မည်။ အ
သစ်ဝင်ရောက်လာသော voice mail များကို မိမိထံ sms ပေးပို့ပြီး အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
လစဉ်ကြေး ၁ဝဝဝကျပ် ပေးဆောင်ရပြီး မည်သည့် ထပ်ဆောင်းပေးချေစရာမလိုပါ။
what is Miss call alert???
Miss call alert ဆိုသည်မှာ မိမိဖုန်းပိတ်ထားစဉ်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းမအားသေးသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ မိမိထံ ဆက်သွယ်သောဖုန်းများက
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း785
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း11
5BB | Global Technology Company
01524978, 09 49208223, 09 49208224
Elite Tech FTTX
No.(A9/10), Shwe Kabar Housing, Mindama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
TEL : (+95-1) 656 945, 656 946
FAX : (+95-1) 656 947
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း105
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း98
Building 12, MICT Park Hlaing Township Yangon, Myanmar
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း107
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း172
by Shwe Than Lwin Media Co., Ltd.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း904
Yatanarpon Teleport Co., Ltd
Yatanarpon Teleport was established in September , 2002 in order to fulfill the growing demand for data communication services for the country's business and in particular the finical sector and the emerging IT industry.
Visited / ဒီဝဗ်ဆိုက်ကို သွားကြည့်သူ စုစုပေါင်း632